Ingabe i-MangaStream Down? Bheka ezinye izindlela ezihamba phambili (2020) - Ezokuzijabulisa
IMangaStream iyiwebhusayithi yama-comic database eku-inthanethi lapho uzokwazi khona ukufunda amahlaya aseJapan mahhala ngokuphelele. Yisevisi yamahhala yabo bonke abathandi bamahlaya. IMangaStream ihlinzeka ngensizakalo yabo yamahhala cishe iminyaka eyishumi ngesithembiso sokuhlinzeka ngamahlaya ama-manga asezingeni eliphakeme mahhala.
Ingabe i-MangaStream Down?
Ngemuva kweminyaka ecishe ibe yishumi ikhululiwe, iwebhusayithi esemthethweni yehle ngokuphelele futhi ayitholakali.Isizathu esiyinhloko sokuvalwa kwaso asikacaciswa yiMangaSteam.Kodwa-ke, ngokweminye yemithombo kulindeleke ukuthi abanikazi bamahlaya wama-manga babafake ingcindezi ethile yokuthi bathathe iwebhusayithi.
UMangastream uthathe isinqumo sokumisa izinsiza zabo ukuze nje akhuthaze indlela esemthethweni yokufunda okuqukethwe. Esinye isizathu kwaba ukusiza ezinye izinsizakalo njengoba iMangaPlus ikhula. IMangaStream ibifuna ukuthi abafundi bafunde amahlaya kweminye imithombo yezomthetho.Iwebhusayithi yamanga ethandwa kakhulu isukile kwi-inthanethi kusukela manje.
Bhalisela i- INetflix India StreamFest ukujabulela Ukusakaza kwamahhala kwezinsuku ezi-2.
Ezinye izindlela ezihamba phambili zeMangastream:
Njengoba iwebhusayithi yeMangastream isusiwe, izivakashi zayo eziningi ezithembekile zingase zicasulwe iqiniso lokuthi iwebhusayithi ayisatholakali. Kodwa-ke, kunezinketho eziningi zokufaka esikhundleni, kepha iMangaStream yayikhona futhi izohlala iphakathi kwamapulatifomu e-inthanethi ethandwa kakhulu e-Manga Comics. Nalu uhlu lwezinye izindlela zeMangastream ongazisebenzisa:
Le webhusayithi inesizinda esikhulu semibhalo yamahlaya asezingeni eliphakeme atholakala kubavakashi. Uma ungeyena umlandeli wokubukeka okudala kwamawebhusayithi amaningi wamahlaya wama-manga, kufanele ubheke le webhusayithi. Ukubukeka kwale webhusayithi kuhluke ngokuphelele.
Le webhusayithi inawo cishe wonke amaqoqo ama-manga angadingwa yinoma yimuphi umfundi we-manga. Ungabheka ngisho namahlaya ama-manga asuselwa kumagama we-A-Z, Izilinganiso, Ukubukwa, kanye nezigaba zakamuva.
Ineqoqo lamanga lama-mangas angaphezu kwama-10,000. Iwebhusayithi iyaqhubeka nokushintsha ikheli layo le-URL ngenxa yokuthandwa kwayo okwenze amacala e-DMCA abhekene nale webhusayithi. Iqoqo leMangaHere ikakhulukazi liqukethe ama-Mangas aseJapan aneKorea Manga, iHongKong Manga, iChinese Manga, i-European Manga, njll.
I-interface yewebhusayithi iyinhle kakhulu. Onke amaqoqo ama-manga ahlukaniswe ngezigaba nezinhlobo ezahlukene. Ibuye inesigaba se-News ukuze abathandi bama-manga bakwazi ukuvuselelwa ngezindaba zakamuva nezizayo zama-manga.
IMangaDex ayinikezi amahlaya amaningi ama-mangas, kepha futhi inezinye izinhlobo eziningi ze-Manga ngayinye. Ezinye zezinguqulo zifaka ezinye iziphetho zezinganekwane zabalandeli, inguqulo enemibala, kanye nochungechunge olusemthethweni lwama-crossover manga. IMangaDex isekela izilimi ezingaphezu kwezingu-20 ezibandakanya isiNtaliyane, isiJalimane, njll.
Ku-MangaDex, uzokwazi ukwenza iqembu lakho ngezigaba ezahlukahlukene zama-mangas noma ungalandela amaqembu asevele etholakala. Ungaxoxa nganoma yini ngama-mangas esigabeni sayo seforamu.
Enye indlela ye-MangaStream engakusiza ngamahlaya ama-manga yi-MangaFox. Ngenxa yokuthandwa kwayo, inikeze ukuvela kumawebhusayithi amaningi enkohliso e-MangaFox.IMangaFox yangempela isetshenziswa nge-fanfox. Inetimu enombala wewolintshi, omhlophe nomnyama. Ukuvuselelwa kwayo kuyashesha.
I-interface yomsebenzisi ihlanzekile impela futhi inobungani. Kubandakanya ukusondeza okuguqukayo kokufunda okungcono. It Ubuye lokusebenza. Kepha, uhlelo lokusebenza alutholakali njengamanje kunoma yiziphi izitolo ezisemthethweni zohlelo lokusebenza.
Le webhusayithi ithandwa kakhulu phakathi kwabafundi bama-manga ngenxa yokukhipha iziqephu ze-WSJ ngokulandelana ngaphambi kokuba ikhishwe ngokusemthethweni. Ungasho ukuthi iMangaOwl ingenye yezindlela ezingcono kakhulu zeMangaStream. Iwebhusayithi ilula kakhulu ukuyisebenzisa.Idatabase layo lamanga liphethwe kahle kakhulu ukuthi akekho ozoba nenkinga ekutholeni amahlaya amaManga abekade ewafuna.
Kunezigaba eziningi kakhulu eziwusizo kubasebenzisi abanjengoSigaba Esisha Sokukhishwa, Isigaba Sokufunda Kumele Sifunde, Isigaba Sokuvuselelwa Kwamuva, isigaba Esaziwa Kakhulu seManga, njll.
IMangaFreak ingenye yezindawo lapho abasebenzisi bengakwazi ukufunda iManga online kuphela. Kepha, bazokwazi nokulanda yonke iManga.Yize iMangaFreak ingadumile kakhulu kubathandi bama manga. Kepha, kunabantu abaningi abavakashela le webhusayithi ukufunda ama-mangas online. Inama-manga scan amahle kakhulu atholakala kuwebhusayithi ezinhlotsheni ezihlukene.
Into ehamba phambili ngale webhusayithi yisigaba sayo Somlando esikusiza ukuthi ugcine umlando wokufundwa kwama-manga wakho ukuthola iManga efundwe phambilini ngaphandle kwenkinga.
I-TenManga yiwebhusayithi entsha yamahlaya wama-inthanethi. Kepha, ine-database emangalisayo yezinhlobo ezahlukahlukene.Le webhusayithi futhi ingathola iManga isebenzisa uhlamvu lokuqala noma inombolo yegama lamagama. Lokhu kubukeka kwewebhusayithi kulula kakhulu.
Uma ufuna ukufunda iManga etholakala kuze kube sekugcineni, isigaba esigcwalisiwe sizokusiza.
IMangaPark ingenye iwebhusayithi yamahlaya yama-manga edumile futhi esetshenzisiwe. Abantu abaningi bayasangana ngale webhusayithi ngenxa yensizakalo yayo.
Le webhusayithi inendawo yokufunda ehlanzekile necacile ebukekayo enenketho yokulayisha izithombe ezingaba yishumi esahlukweni ngasinye.
Le webhusayithi inamahlaya amaningi ozokwazi ukuwafunda ezigabeni ezahlukahlukene ezifana nesigaba se-Latest Manga noma i-Newest Manga Section ngisho ne-Hot Manga Section.Inezinhlobo ezahlukahlukene ezigcwele izkena eziningi ezisezingeni eliphakeme zamanga.Inokubukeka okuhle, futhi izivakashi zingazulazula kalula okuqukethwe okutholakalayo.
Ikhasi eliyisiqalo lizokusiza ukuthi ubonise izibuyekezo zakamuva mayelana nama-mangas.Futhi inesici sokuskena mpo okwenza ukufunda kube mnandi kakhudlwana. Ibuye ilayishe zonke izithombe ngasikhathi sinye, ongazicisha nokugcina idatha ngenkathi ufunda.
Uma uyisivakashi esivamile kwiMangaStream lapho-ke siyaqiniseka ukuthi uzothanda iMangaPanda.Uma uvakashela iwebhusayithi yeMangaPanda, ungangena kulabhulali yama-1000s wamahlaya asezingeni eliphakeme wama-manga.Ungangena kule webhusayithi ngocingo lwakho, ikhompyutha noma ithebhulethi.
Uzokwazi ukuthola zonke izinhlobo zamahlaya ezinjengezenzo, ukuzijabulisa, imfihlakalo, ezothando, okuthokozisayo, nokunye okuningi.Isikhungo sokufunda online naso siyafana neMangaSteam. Kukhona inketho yeSurprise Me kuwebhusayithi ekusizayo uma udidekile ngokuthi iyiphi i-comic ongayifunda.
Siyazi ukuthi amahlaya abe yindawo yokuphunyuka kubantu isikhathi eside. Kuyindlela yokuphila ifantasy yakho. Igama le-Manga likhulu kakhulu futhi ngeke udinga ukuthembela kungxenyekazi ethile.Kodwa-ke, iMangastream ibingenye yamawebhusayithi adume kakhulu kumahlaya aku-inthanethi aku-inthanethi. Kepha, ngenxa yokuvalwa kwale webhusayithi, sekuvele amanye amawebhusayithi amaningi.
Ngakho-ke, lapha sinezinye izindlela ezingcono kakhulu zeMangastream ukukunikeza ulwazi lokufunda olujabulisayo. Shesha ubheke ezinye izindlela ezihamba phambili zeMangaStream ukuqala ukufunda amahlaya wakho owathandayo.
Izindlela ezi-10 ezihamba phambili zeKissAnime.ru
Izindawo ezihamba phambili ze-Anime